Ciidamada Ammaanka magaalada Gaalkacyo oo qabtay nin wiil iyo aabihiisa xalay dil u geystay | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR GALMUDUG Ciidamada Ammaanka magaalada Gaalkacyo oo qabtay nin wiil iyo aabihiisa xalay dil...
Ciidamada Ammaanka magaalada Gaalkacyo oo qabtay nin wiil iyo aabihiisa xalay dil u geystay
Gaalkacyo(SNTV) Wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ay gacantaku dhigeen nin hubaysan oo xalay magaaladaasi ku dilay wiil iyo Aabihiisa.
Nin hubeysan ayaa xalay Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee dowlad goboleedka Puntland waxa uu ku dilay Aabe iyo Wiil uu dhalay,iyada oo ninkaas dilka geeystay Ciidamada Puntland ay gacanta ku dhigeen.
Dilka ayaa ka dhacay banaanka Hotel kuyaala Waqooyiga magaalada Gaalkacyo,macadda sababta, balse wararka ayaa sheegay in ninka dadkaasi dilay la sheegay in uu ahaa qof maskaxda looga jiray,aabaha ayaa magaciisa lagu sheegay Sheekh Xasan Saalax oo kamid ahaa culimada sida weyn looga yaqaanno magaaladaasi.
Majiraan wax war ah oo maamulka iyo saraakiisha ammaanka ay ka soo saareen falkaasi dilka ah,balse ciidamada ayaa weli gacanta ku haya ruuxa fuliyay dilkaasi,waxaana la filayaa in xaaladiisa ay war rasmi ah ka soo saaraan.
Previous articleCiidamada Ammaanka Puntland oo ka hortagay weerar ay ku soo qaadeen Maleeshiyada Shabaab
Next articleYugaabdha oo gar-gaar u soo dirtay Dadka ay saamaysay fatahaadda Webiga Shabeelle